NGOKUGQIBELA.FM. Uyenza njani iakhawunti ukufumanisa umculo omtsha usebenzisa i-LASTFM | Iindaba zeGajethi
NGOKUGQIBELA.FM. Uyenza njani iakhawunti ukufumana umculo omtsha usebenzisa i-LASTFM
Last.fm sisikhululo somculo esikwi-Intanethi esiziqhelanisa nothando lwakho lomculo. Yintoni eyenziwa nguLast.fm kukuhlalutya umculo owuphulaphulayo kwisidlali sakho kwaye ukhangele iingoma ezinxulumene nezinto ozithandayo zomculo. Ukuze ukwazi ukusebenzisa iLast.fm kufuneka ufake inkqubo kwikhompyuter yakho kwaye uvule ifayile ye- iakhawunti yasimahla. Oku kuyakuvumela ukuba umamele umculo ofana nalowo uqhele ukumamela kwaye ugcine iingoma, uya kuba nakho ukudibana nabasebenzisi abanomdla ofanayo womculo kowakho kwaye ufumane nekhowudi yokufaka isikhululo sikanomathotholo kwibhlog yakho okanye iwebhusayithi.
TZonke ezi zinto zingasentla azisimahla, awunyanzelekanga ukuba uhlawule ngokukhuphela isoftware (inkqubo) okanye ukuyifaka okanye ukuyisebenzisa. Kodwa kubasebenzisi ababhalisele Last.fmNgomrhumo wenyanga, kukho uthotho lweenkonzo ezongeziweyo ezinjengokudlala iingoma zakho ezigcinwe njengezintandokazi okanye ukumamela irediyo yakho eyenzelwe wena. Ngayiphi na imeko siza kugxila kwi inguqulelo ke ukuba unomdla wokudibana namaqela amatsha neemvumi, landela le mini inyathelo ngenyathelo lokufundisa ngeLAST.FM.
1) Into yokuqala iya kuba kukubhalisa kwiphepha ukuvula iakhawunti yasimahla, khumbula ukuba kamva ungabhalisela iakhawunti ehlawulwayo ukuba uyafuna, kodwa ukuba awunakho ungaqhubeka nokusebenzisa iakhawunti yakho simahla, nangona unemiqobo ethile. Yiya e yeyokugqibela.es ukwenza iakhawunti yakho ngeSpanish. Unga tshintshela kolunye ulwimi ukucofa utolo olubonakala ecaleni kweflegi. Unokukhetha phakathi kwesiJamani, iSpanish, isiFrentshi, isiTaliyane, isiPolish, isiPhuthukezi, iSweden, isiTurkey, isiRashiya, isiJapan nesiTshayina.
Xa unolwimi olukhethiweyo, cofa kwiqhosha lesilivere elithi «Bhalisa».
2) Ngoku uya kuba phambi kwakho isikrini sobhaliso esibizwa «Bhalisela iLast.fm». Gcwalisa onke amasimi, kwaye ufunde imiGaqo ngokuBanzi, ukuba uyavumelana nabo khangela ibhokisi "Ndiyazamkela iiMeko Jikelele", ukuba awuvumi awuyi kuba nakho ukwenza iakhawunti yakho.
Jonga lo mfanekiso ungasentla, unokongeza kwibhokisi yemeko ngokubanzi kwenye ibhokisi ecaleni kwe "Iphepha leendaba elinqabileyo lokundigcina ndisexesheni", khangela le bhokisi ukuba ufuna ukufumana i-imeyile enolwazi amaxesha ngamaxesha. Kwakhona jonga indawo ebonisiweyo ecaleni ko «Bhala amagama amabini», kuya kufuneka ubhale amagama amabini abonakala agqwethiwe kwisikwere esivela kwifestile yakho. Ukuba isangqa esiluhlaza sivela endaweni yebhokisi, awuzukubhala nto. Xa ugqibile, cofa ku "Bhalisa kwaye wenze iprofayile yakho."
3) Ngoku uya kuza kwi window Ukhuphelo lweLast.fm cofa kwiqhosha «Landa iLast.fm» kwaye iwindow iya kwandisa ubungakanani bayo ezantsi ikuvumela ukuba ubone elinye iqhosha elibizwa ngokuba yi "Khuphela ngoku», qiniseka ukuba ukhethe inkqubo yakho yokusebenza kwaye ucofe kwiqhosha.
4) Xa uyikhuphele le nkqubo, cofa kabini kuyo. Inkqubo ye- inguqulelo Okwangoku iLast.fm yi 1.3.2 kunye nefayili ekhutshelweyo ibizwa ngokuba yi "Last.fm-1.3.2.13b.exe», ukuba ubona kuphela «Last.fm-1.3.2.13b» akwenzeki nto, kukuba ikhomputha yakho igcina izandiso ezifihliweyo.
5) Emva kokucofa kabini kwifayile ufakelo luya kuqala. Oku kulula kakhulu, iquka kuphela ukunqakraza kwiqhosha le- «Okulandelayo>» ude ufike kwi Window yoqwalaselo lweWizard ebizwa ngokuba yi-"Login" apho kuyakufuneka ufake igama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha olileleyo ngexesha lobhaliso kwiLastfm.
Ukuba awufuni ukungena kwi igama kunye negama lokugqitha ngalo lonke ixesha uvula Last.fm Jonga ibhokisi ecaleni kwe "Khumbula iphasiwedi yam." Ukuba ufaka inkqubo kwikhompyuter esetyenziswa ngabantu abaliqela, ayingombono olungileyo ukujonga le bhokisi njengoko nabani na enokufikelela kwiakhawunti yakho.
6) Cofa ku «Okulandelayo>» kwakhona. I-Last.fm iya kukhangela abadlali bomculo obafakileyo kwi-PC yakho kwaye baya kukhuphela iiplagi (izixhobo zabadlali) eziyimfuneko kwinkqubo yokusebenza ngokuchanekileyo. Cofa ku «Okulandelayo>» kwaye abadlali abafunyenweyo baya kuvela kwiscreen.
Akunabo bonke abadlali abahambelana ne-Last.fm, umzekelo Aimp Classic Akunjalo, esinye isizathu sokuba ungasebenzisi i-Aimp Classic. Kwimeko yam iye yamkela iWinamp kunye neWindows Media Player. Cofa ku «Okulandelayo>» kwaye kwiwindow entsha ucofe ku "Gqiba".
YSineLast.fm efakwe kwikhompyuter yethu, ngoku bhala igama leqela okanye umculi ukuqala kwaye ucofe ku «Mamela». Uya kuqala ukuva iingoma ezinxulumene nomculi okhethiweyo.
EKwimeko yam ndikhethile "Sade" ngubani omnye weemvumi endizithandayo kwaye inkqubo izakundibonisa isikhululo sabaculi abafana noSade.
BKulungile okwangoku, ukuba uyafuna ungafunda uyenza njani ibhlog kunye ne-FM yokugqibela. Ndiza kuqhubeka nokongeza iincwadana apho uza kubona ukuba ungayenza ntoni nge akhawunti entsha kwiLast.fm. Okwangoku unokuziphanda kwaye ubone ukuba zeziphi iingoma kunye neebhendi ezintsha ozifumanayo. Ndiyathemba ukuba uyayithanda iLast.fm njengoko ndenzayo, naku usiya iphepha lam lokugqibela lomsebenzisi kwabo bafuna ukwabelana ngeengoma zam zomculo. Imibuliso yeVinegary.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » NGOKUGQIBELA.FM. Uyenza njani iakhawunti ukufumana umculo omtsha usebenzisa i-LASTFM
imeyile yam yomculo
awazi ukuba ungagcina njani.fm ukuba ibhlokiwe? uyazi, njengaxa bebhloka abathunywa okanye uhi5. Sele ndijongane nabameli kwaye akukho nto. Zama ukudlulisa inkqubo esele ifakiwe kwi-usb yam kwaye uneengxaki kwi-wizard yoqwalaselo, ayikwazi ukufikelela kwi-intanethi. Ndingavuya ukuba ungacebisa isisombululo okanye elinye iphepha
Ndisebenzisa i-deezer okwangoku, kodwa ayisiyonto inomtsalane njengeyokugqibela.fm. yingxaki leyo.
Ndindedwa apha ehlathini lam elibuhlungu kwaye ndiyakhumbula
ukuhlawula isigwebo k ro indoda ndiyibulele
Ndihlala ndicinga ngomama ubomi bam bonke ngomlo wam
Eziphi iingcebiso andinike zona entlokweni yam andizange ndingene
Ndiyathemba ukuba usezulwini uyandimamela andixolele
Bendiyindoda enayo yonke into kodwa andizange ndibeno tata
Kwaye kukho into endandifuna ukumxelela yona zange andikhuthaze kwafuneka ndithule
zaqengqeleka iinyanga ndisesiseleni ngenye imini kwafika indoda
Ndineenwele ezimhlophe kakhulu kwaye nam ndinjalo
Ngokwento ayithethileyo, ebesejele kangangeminyaka engama-24
Kwaye k waba nosizi olukhulu kunye nentlungu enkulu esifubeni sakhe
Kwakuyimini ngoJanuwari kwaye iqabane lam lasondela kum
Uye wandixelela ukuba uyafuna ukuthetha kwaye ndihlala ecaleni kwam
Undixelele undixelele ngezinto zakho zobomi endinazo ngaphakathi kuwe
Ndamxelela ukuba ndingumama olungileyo kodwa andimazi umama
kunye nokuhamba nabahlobo abangalunganga umama osweleyo waphulukana naye
Indoda yandixelela ukuba ixesha elide wayenomfazi
Lowo wayemthanda ngomphefumlo wakhe esiswini sakhe wathwala unyana wakhe
Uye waphuma ngenye imva kwemini wayokufuna umsebenzi ngoba ebengenanto yokutya
kodwa naphina apho aya khona akazange abenethamsanqa wayengazi ukuba makathini
ukusukela kwiminyaka engama-24 eyadlulayo ehlawula yonke impazamo yakhe
uhlala ecinga ngesithandwa sakhe esilungileyo nonyana wakhe omncinci angamaziyo
Ndimbuzile ngesithandwa sakhe ukuba ngubani igama lakhe kwaye uphendule wandixelela igama elipheleleyo kunye nokubila okubandayo ngokubaleka kwam
laa mfazi yayingumama wam naphambi kotata yayingam
Eli libali elenzeka nakubani na
imbali yokwenzakala okwenzekileyo kum
Andinatata kodwa bendinomama endimlwelayo ubomi bakhe bonke
U-akel k unomama k uhlala umkhathalele kwaye uyazi ukuba unexabiso
kuba usuku k alusenanto ininzi luyakuphulukana kodwa luya kuhlwa
oh, oh, oh, hayi ohoh sukuxoka, nceda, nguwe wedwa kuye, unjengam nje kuba andazi into andixelele yona umhlobo wam, ndim kuphela lo.
mamela andixoki ndiyakucela mfondini ndiyakuthanda ohohoh
Le ngoma yeyakho, akunjalo?
Ungabhalisa njani kwi-RSS feed kwaye yintoni i-RSS feed
Thintela uhlaziyo loMyalezo okanye ubuyele kuhlobo lwangaphambili